Ukusuka kwiReddit kunye neQuora: Imibuzo eyi-12 (eshushu ngokuxoxwa) malunga neNMN-AASraw
/Blog/Ithala/Ukusuka kwiReddit kunye neQuora: Imibuzo eli-12 (Eshushu Exoxisanayo) malunga neNMN
ezaposwa ngomhla 08 / 19 / 2021 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Yintoni i-NAD + enokuyenza ngayo nge-NMN?
Ngaba i-NMN Powder Safe Supplements?
Zeziphi izibonelelo ezinokuziswa ngumgubo weNMN kuMzimba wam?
Ndingayifumana i-NMN eyoneleyo ukusuka ekutyeni ukuya ekuchaseni ukuguga?
Uyithatha njani ipowder yeNMN?
Ndifanele ukuthatha ezinye izongezo kunye ne-NMN kunye?
Ngaba i-NMN iluncedo ngokuLwa ne-COVID-2019?
I-NMN VS. NR: Yeyiphi engcono?
Ndingayifumana njani eyona Powder yeNMN?
Ungayigcina njani iPowder yeNMN?
Ngaba kukhona uPhononongo lwenyani ngePowder yeNMN?
Njengoko sonke sisazi, iimveliso ezichaseneyo nokuguga sisihloko esisigxina kwaye abantu abaninzi bafunda le ntsimi ixesha elide, Ngo-2018, kukho amachiza amatsha okulwa ukwaluphala kwaye kwabangela ukuba kubekho izinto ezingahambisani nokuguga, le mveliso intsha ibizwa ngokuba " I-NMN ”. I-NMN (β-Nicotinamide Mononucleotide) njengohlobo olutsha lwezincedisi ezichasene nokwaluphala ithandwa kakhulu. Ukuthatha izongezo ze-NMN okanye ukongeza umgubo we-NMN kwisidlo sakusasa yinto eqhelekileyo ebonakalayo ukusukela ngo-2020. Loluphi ulwazi ekufuneka silwazi malunga neNMN kunye nendlela yokuthenga i-NMN powder online, yonke imibuzo ixhalabile ngabantu abaninzi abakulungeleyo ukusebenzisa i-NMN powder okanye i-supplements. Namhlanje, siqokelele ezona zihloko zixoxwayo kwi-intanethi ukusuka kwi-reddit kunye ne-quora kwi-NMN, ndiyathemba ukuba ezi mpendulo zingakunceda uyazi i-NMN kwaye uthenge i-NMN powder yokwenyani kwi-intanethi.
I-NMN imfutshane nge-nicotinamide mononucleotide (i-CAS: 1094-61-7), imolekyuli eyenzeka ngokwendalo ekhoyo kuzo zonke iintlobo. Kwinqanaba leemolekyuli, yi-ribonucleotide, iyunithi yesiseko se-nucleic acid RNA. Kwimo iqulathe iqela nicotinamide, ribose kunye neqela phosphate. I-NMN sisiphumo seVitamin B3 (niacin). Iyenzeka ngokwendalo kwaye inokwenziwa kwimithombo yokutya efana neziqhamo, ubisi, kunye nemifuno. Emzimbeni, i-NMN isetyenziselwa ukuvelisa nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +), imolekyuli enamandla nebalulekileyo efumaneka kwiseli nganye yomzimba. Ke, ukuthatha i-NMN powder yenye yeendlela ezinokuthi zonyuswe amanqanaba e-NAD + kwiseli, emva koko ufezekise injongo yokulwa ukuguga.
Okwangoku, zininzi iindlela zokuvelisa izinto zeNMN kwimveliso, ekwabizwa ngokuba ngumgubo weNMN. Ngokwazi kwam, ndiyazazi iindlela ezi-2 ezivela kumzi mveliso ovelisa umgubo weNMN:
Indlela ye-1 yokwenza i-NMN powder: indlela yeCatalyst (iBakala lezeMveliso)
Le mveliso yenziweyo kuphela yokusetyenziswa kokuphendula kwamachiza, ayilungelanga umntu, akuyi kufuneka ukuba babone isinyithi esinzima, isalathiso se-microbiological ngaphakathi komgubo, kuyingozi.
Indlela ye-2 yokwenza i-NMN powder: Indlela ye-Enzymatic (iBakala lokutya)
Ngale ndlela, umgubo we-NMN ukhuselekile ekusebenziseni kwabantu, kwaye akukho ntsalela ye-Reagent, nokuba isebenzise indlela esemgangathweni yangaphandle yokuvavanya umgangatho, iziphumo azikabikho kubunyulu be-98%. . .
I-AASraw ngumzi mveliso wokuvelisa i-NMN powder e-China kwaye yeyiphi indlela esiyisebenzisileyo yindlela ye-enzymatic, yonke i-batch NMN powder iya kuvavanywa ngaphambi kokuba ithengiswe kwaye ubunyulu bubonisa i-99% min, umgangatho uzinzile. Senze izivumelwano kunye neenkampani ezininzi zokuncedisa kwaye sabonelela nge-NMN powder kubo ixesha elide. Alithandabuzeki elokuba indlela ye-Enzymatic lukhetho olufanelekileyo kuninzi lweefektri. Ke, nceda qinisekisa oku kunye nomthengisi wakho we-NMN powder phambi kwakho thenga isambuku seNMN powder.
I-NAD imele i-nicotinamide adenine dinucleotide. Ukusuka kwiibhaktheriya ukuya kumathambo, yenye yezona molekyuli zininzi kwaye zibalulekile kwimetabolism yeselula. Ngenye indlela, wonke umzimba unento ye-NAD, sinokufa kwimizuzwana engama-30 ngaphandle kobukho be-NAD +. Oko kusixelela ukuba i-NAD + yinto ebaluleke kakhulu emzimbeni wethu, inokuxhasa ukusebenza komzimba wethu njengesiqhelo mihla le.
I-NAD + isebenza njengebhasi ehamba ngesiphekepheke, ihambisa ii-elektroniki kuyo yonke imolekyuli yeselula iye kwenye inceda ukuguqula izakhamzimba zibe ngamandla njengomdlali ophambili kwimetabolism kwaye isebenze njengemolekyuli encedisayo yeeproteni ezilawula eminye imisebenzi yeselula. Ezi nkqubo zibaluleke kakhulu, kwaye enye imisebenzi ye-NAD + ibandakanya ukulawula umjikelo wokulala / wokuvuka. I-NAD + iqhuba i-sirtuins ukulawula imetabolism kunye nokugcina ii-chromosomes ezizinzileyo. Imolekyuli ikwanceda ekulungiseni iDNA eyonakeleyo.
Ke, kubaluleke kakhulu ukugcina inqanaba le-NAD + lomzimba wethu. Oko kwasixelela ukuba sifumana umncinci ngokwandisa inqanaba le-NAD, + sincede silwe nokuguga. Ke yintoni ekufuneka siyonyuse inqanaba lethu le-NAD +?
Njengoko oososayensi bathi, zintathu iindlela zokunyusa inqanaba le-NAD +:
Iirejimeni zokutya ezihlengahlengisiweyo. Ukutya okuphezulu kumafutha kunye ne-carbohydrate ephantsi, njenge-keto okanye i-Atkins-style diet, kukhuthaza imeko ye-ketosis. Xa umzimba wakho ukwiketosis, usebenzisa amanqatha ukufumana amandla endaweni yeswekile. Obu buchule bonyusa umyinge we-NAD + ukuya kwi-NADH, ngaloo ndlela ukhusela umzimba wakho kwi-oxidation.
Ukongezwa kwe-NAD +. Umzimba wakho unesakhono esipheleleyo sokuvelisa i-NAD +, ke ukufumana isongezelelo kumvelisi owaziwayo onika iziqinisekiso zobunyulu yindlela engenabuhlungu yokunyusa la manqanaba emzimbeni wakho. Ezi zongezelelo zibandakanya inicotinamide, nicotinic acid, nicotinamide mononucleotide (NMN), kunye nicotinamide riboside (NR). 【I-Nicotinic acid iguquka iye kwi-NAD + ngamanyathelo amathathu. Kwinyathelo lokuqala, i-enzyme i-NAPRT iguqula i-nicotinic acid ibe yi-nicotinic acid mononucleotide (NAMN). Kwinyathelo lesibini, i-enzyme, i-NMNAT, iguqula i-NAMN ibe yi-nicotinic acid adenine dinucleotide (NAAD). I-enzyme, i-NAD + synthetase (NADS) emva koko iguqula i-NAAD iye kwi-NAD +. I-NAD + i-biosynthesis kwindlela ye-salvage ibandakanya ukuguqulwa kwe-nicotinamide ibe yi-NMN nge-enzyme, i-phosphoribosyltransferase, i-NMNAT. I-enzyme iguqula i-NMN iye kwi-NAD +.
Ukuziqhelanisa nokuzila ukutya okwexeshana. Ngelixa ukuthintelwa okunzima kweekhalori okanye ixesha elide lokuzila ukutya kungacetyiswa kubantu abadala, ukuzila okufutshane okanye okwexeshana kunokubonisa iziphumo ezifanayo. Ukuzila ukutya okungapheliyo yindlela egcinakalayo yokwazisa umzimba wakho kumaxesha amade ngaphandle kokutya, ukuphakamisa amanqanaba akho e-NAD + ngendlela efanayo ne-ketosis.
Ngelishwa, ukutya okunamafutha aphezulu kunokungacetyiswa ukuba unesifo seswekile, isifo sentliziyo, okanye ukwanda kwe-cholesterol ye-LDL. Ngokufanayo, ukuzila ukutya akunakucetyiswa kwabo baneemeko zonyango kwaye kuhlala kunzima ukuqhubeka nokuhamba kwexesha. Ke, ukongeza kunye ne-NMN powders okanye enye Izibonelelo zeNAD yeyona ndlela ikhuselekileyo neyona ikhuselekileyo yokukhuthaza imveliso eyandisiweyo yeNAD.
Emva kokuba siyazi i-NAD + kwaye isebenza njani, ndiyaqikelela ukuba kuya kufuneka uyazi ukuba kutheni sifuna ukuthatha umgubo weNMN? Isebenza njani xa i-NMN powder emzimbeni wethu. Ngendlela elula, i-NMN ingumanduleli we-NAD + ngaphambi kokungena emzimbeni wethu. Ukuthatha i-NMN powder kunganyusa inqanaba le-NAD + kwaye kusincede sibethe isantya sokuguga.
Uninzi lwedatha ukuza kuthi ga ngoku luvela kwizilwanyana, ezingakhange zibonise naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga. Uphononongo lweempuku lwexesha elide alubonisanga netyhefu, iziphumo ebezingalindelekanga ezibi, okanye ukonyuka kwenqanaba lokusweleka ngexesha lokungenelela leenyanga ezili-12. Ngokwazi kwethu, Uvavanyo lomntu kutshanje lwenziwe ngaphandle kweJapan. Injongo yolu vavanyo yayikukufumanisa ukuba ingaba umgubo we-NMN ukhuselekile ukuba ungathathwa. I-NMN yalawulwa kumadoda alishumi asempilweni. Imilinganiselo ye-10, 100, kunye ne-250 mg ye-NMN yanikwa. Ulawulo lomlomo olunye lwe-NMN aluzange lubangele naziphi na iimpawu ezibalulekileyo zeklinikhi okanye utshintsho kwiimpawu eziphambili ezinjengezinga lentliziyo, uxinzelelo lwegazi, ukugcwala kweoksijini, kunye nobushushu bomzimba. Ityala linceda ukuqinisekisa ukuba, ngokubanzi, i-NMN powder ikhuselekile kwaye iyanyamezeleka; Ukuza kuthi ga ngoku, ukulingwa kunokuthathwa njengempumelelo. Olu pho nonongo luye lwalinganisa umgangatho wokulala, kwaye alufumananga nantlukwano ngaphambi nangemva kokusetyenziswa kwe-NMN.
Ngenxa yenani eliqingqiweyo lovavanyo lomntu, izazinzulu ziyaqhubeka nokuphonononga iziphumo ebezingalindelekanga ze-NMN, zizama ukufumana idatha yezonyango ngakumbi kwizilingo zabantu, ukuze kuqinisekiswe ukuba le mveliso intsha yokulwa ukwaluphala isungulwe ngokusesikweni.
Kwangelo xesha, kufuneka sithethe ngoGqirha David Sinclair ongomnye wabantu abali-100 abanempembelelo kwihlabathi yiTime Magazine, ebethatha izongezo zeNMN iminyaka nabahlobo kwishishini lokuguga. Wabelana nathi ngamava emva kokuba ethathe i-NMN powder ixesha elide. Uthe: “Ndihlala ndithatha i-1 gram ye-NMN yonke imihla, kunye nezinye izongezo kubandakanya i-resveratrol, i-metformin kunye ne-aspirin. Andikaze ndibenayo enye into ngaphandle kokukhathazeka esiswini ukuza kuthi ga ngoku. ” Uye wakhumbuza ukuba kufuneka sigcine i-NMN powder kwimozulu epholileyo okanye kwindawo efrijini, kuba i-NMN ithoba isidima sibe yiNicotinamide yityhefu yomzimba wakho xa i-NMN igcinwe kumaqondo ashushu / ashushu.
I-NMN (iNicotinamide Mononuleotide) sisandulela sendalo seNAD +. Ukuxhaswa kwe-NMN kuphakamisa i-DAN + kwimpilo ebalulekileyo kunye nokuphila ixesha elide phakathi kokubonelela ngezinye izibonelelo zezempilo.I-NMN powder ikwizigaba zokuqala zolingo lomntu kwaye amabango ezibonelelo zangoku abeyimpumelelo yezifundo zezilwanyana. Ukuza kuthi ga ngoku, akukho bungqina bokuba naziphi na iziphumo ezibi, nokuba kukwidosi ephezulu ngaphezulu kwexesha elide. Ikwabonakalise izibonelelo zempilo kwiimeko zohlobo lweswekile lwesibini kunye Izifo ze-Alzheimer'sNgezantsi zi-10 zezibonelelo eziphezulu ze-NMN powder:
Isiphumo sokuchasana nokwaluphala
Yandisa ukuchuma kwabasetyhini
Ro Ukuphucula ukubona nokubona
Oster Ukomeleza amandla
Kuququzelelwa ukulungiswa kwemicu yeDNA eyaphukileyo
Ukuphucula ukusebenza kwezintso kunye nokuhamba kwegazi
Ihlisa i-cholesterol kunye ne-triglycerides
Ukuphucula ukusebenza kwenkqubo yomzimba yokuzikhusela
Ukukhuthaza impilo yentliziyo nomsebenzi
Ukuphucula umsebenzi we-mitochondrial ngokunciphisa i-neuroinfigue
Impendulo "kunjalo". Ngenxa yokuba i-NMN ifumaneka ngokwendalo kukutya okuninzi kwaye ungakufumana lula ebomini bethu.
Ngoku, kufuneka ucinge: “Ukuba i-NMN ifumaneka ekutyeni, andinakonyusa amanqanaba am eNAD + ngokutya ngaphezulu koku kutya?” Lowo ngumbuzo olungileyo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ndibonise ukuba ufuna ukubuyisela umva ukuguga nge-NMN, kuya kufuneka utye isixa esikhulu soku kutya nganye. Ngelishwa, i-NMN kwizikhondo ezimbalwa ze-broccoli kunzima ngokwaneleyo ukuba ingaqala ukunyusa amanqanaba e-NMN Nangona i-NMN isenzeka koku kutya, ukugxila kungaphantsi kwe-1 mg ngekg nganye yokutya. Ngamanye amagama, ukufumana malunga ne-1mg ye-NMN, kuya kufuneka utye malunga ne-1kg ye-broccoli! Kufunyenwe ukuba ukunyusa amanqanaba e-NAD + ebantwini, amanqanaba e-NMN kufuneka abe kumakhulu emiligram ngedosi. Le ndlela iphezulu kunento esinokuyifumana kwizidlo zethu, nokuba singatya ibroccoli engakanani. Ke, kuya kufuneka siqwalasele malunga nokuthatha i-NMN powder njengezongezo zokulwa ukuguga ebomini bethu, inokunceda umzimba wethu ukonyuse i-NAD + engaphezulu, ukulwa nokuguga.
Kumbuzo wokugqibela, sikhankanye uGqirha David Sinclair othathe i-1g NMN yonke imihla. Ke i-1g yeyona dosi isebenzayo kuthi yokufumana izibonelelo ze-NMN, akunjalo? “Ngokuqinisekileyo akunjalo!” Xa usebenza ukuba ufuna ukuthatha malini, kubalulekile ukuba ujonge indlela i-NMN elawulwa ngayo kunye nokufumaneka kwayo. Ngaphezu, umzimba eyahlukileyo abasabela ezahlukeneyo. Kufuneka sazi ukuba kulungile nini ukuthatha i-NMN, indlela yokuyithatha kwaye kufuneka sithathe malini xa sele ukulungele ukuthatha umgubo weNMN.
Makhe sithethe umbuzo wokuqala: Uyithatha njani i-NMN powder?
I-NMN ilawulwa ngeendlela ezine eziya kuthi zichaphazele ukuba ingakanani inyani yeNMN eyenzayo kwinkqubo yegazi: umgubo, umgubo, iilifomsile ezisemgangathweni, kunye neephilisi ezinganyangekiyo esiswini.
Ukuqonda ukungafumaneki, umntu kufuneka aqonde isiphumo sokuQala sokuPasa (ibhekisa kubungakanani bento etshabalalisiweyo okanye eqhutywa sisibindi ngaphambi kokuba ingene kwinkqubo yegazi). Lo ngumbono onzima, ndicinga ukuba le vidiyo ingasinceda ukuba siqonde ukuba isebenza njani kwaye kutheni kubaluleke kakhulu kuthi ukuba siyazi ngaphambi kokuthatha umgubo weNMN. Ngenxa yemetabolism yokupasa okokuqala, ukusetyenziswa komlomo kwe-NMN kuncinci kunokusebenza kunamagama asezantsi okanye njengezingxobo zesisu. Xa i-NMN powder ithathwa ngomlomo (nokuba ityiwe okanye ixutywe nolwelo) uninzi lwayo luyatshatyalaliswa sisisu esiswini. I-NMN eseleyo emva koko idityaniswa sisibindi. Indlela isibindi esidibanisa ngayo i-NMN inokuba nefuthe elikhulu kwi-bioavailability. Kungenzeka ukuba liqhekeza le-NMN kuphela eliyenzayo kwinkqubo yakho. Kananjalo ukuphucula amanqanaba akho e-NAD, ungathatha iipilisi zeNMN zokulibaziseka ngeSirtuin Activator enje Resveratrol ngeyogathi enamafutha apheleleyo anceda ukubakho kokufumaneka kweResveratrol.
Kodwa xa i-NMN (okanye naliphi na iyeza okanye isongezelelo) ithathwa ngokungagungqiyo, iyangena kwiimbumba (phantsi kolwimi) kwaye idlulele ngqo kwigazi. Ukusuka apho uhamba uye ngqo kwingqondo nakwamanye amalungu, udlula "umphumo wokuqala wokudlula" kwisibindi. Kungenxa yesi sizathu, sikholelwa ukuba ukuthatha i-NMN yolwimi okanye kwi-capsule enganyangekiyo esiswini lolona lusebenzayo nolusebenzayo. Inokufuna iidosi ezisezantsi kunokuthatha i-NMN powder ngomlomo okanye kwifomule yefomule esemgangathweni.
Umbuzo olandelayo: Nini elona xesha lilungileyo lokuthatha umgubo weNMN?
Ukwaluphala sisifo esinokulwa ngokudibana kwezihlanganisi kunye nokuziphatha, ngokutsho kophando olutsha oluvela kwiYunivesithi yaseWaterloo. kwiminyaka yabo. Ezinye izinto zokuthintela ukwaluphala kufuneka zithathwe ngabantu abancinci ebusuku, ngelixa abantu abadala kufuneka bayithathe emini kwelona xesha lisebenza kakhulu. ichaphazela umzimba wakho, ubudala bakho kunye nendlela ophila ngayo, ”utshilo umphandi uLayton. “Abantu kufuneka bakhumbule ukuba batya nini kwaye baqinisekise ukuba iyangqinelana nezinye izinto kwindawo abahlala kuzo ezichaphazela umjikelo wabo wokulala / wokuvuka okanye iwotshi yomzimba.
Ke, xa leliphi ixesha elifanelekileyo lokuthatha umgubo weNMN? Ubudala yeyona nto iphambili ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga nokuba sithatha malini i-NMN powder. Umzekelo, kwafundwa ukuba izongezo ze-NMN ziluncedo kakhulu kulutsha ukuba luthathe iiyure ezintandathu emva kokuvuka. Ngokuphambene noko, uphando lubonisa ukuba i-Resveratrol isongezelelo isebenza kakuhle xa abantu abatsha beyithatha emva kwemini. Kubantu abadala abadala, kubalulekile ukuthatha ezi zongezo emva kwemini.
Umbuzo wokugqibela: Singayithatha kangakanani ipowder yeNMN?
Emva kokuba sifunde le mibuzo ingentla, kufuneka sazi ukuba wonke umntu kufuneka afumane idosi ye-NMN powder, hayi idosi eyiyo njengengcebiso. Ke singayibala njani idosi yeNMN ngokwethu? Njengezifundo zamva nje, zinxulumene nobunzima bethu. Ukusuka kuphononongo: “Ngenxa yokuba i-100 mg / kg / imini ye-NMN ikwazile ukunciphisa ukwehla okunxulumene nobudala bomzimba kwiimpuku, idosi yommandla olinganayo woluntu iya kuba ~ 8 mg / kg / ngosuku, inika ithemba lokuguqula ebantwini. ” Ngokwababhali bophando lophando lwamva nje, kukuthatha ubuncinci obungenanto i-8 mg ye-NMN ngekg yesisindo somzimba ngosuku. Ukuba uphononongo luchanekile, ke ukufumana ukuba ingakanani i-NMN oyidingayo ubuncinci, kuya kufuneka kuqala ufumane ubunzima bakho kwi-kg, wandule ukuphinda-phinda ngo-8. Umzekelo, ukuba ubunzima bakho bungu-50kg, idosi ekhuthazwayo imalunga ne-400mg.
Ukuba uthatha umgangatho ophezulu wokuncedisa nge-bioavailability, njenge-AASraw Umgubo we-NMN, emva koko sicebisa iidosi ezilandelayo ezisekwe kwingxelo yabathengi:
ubunzima Isisombululo sereferensi (yonke imihla)
Le milinganiselo ifana nokucoca. Ufanele ukuthatha malini? Ixhomekeke kuwe. Kodwa ukuba ufumanisa ukuba olu phononongo luyakholisa, ungaqala ukubala kwakho nge-8 mg ngekg yesisindo somzimba ngosuku.
Ukuba ungumqwalaseli olungileyo, kuya kufuneka uqaphele ukuba uGqirha David Sinclair uthatha izongezo zokuguga yonke imihla, hayi kuphela i-NMN powder, nayo inezinye, ezifana ne-resveratrol, metformin, kunye ne-aspirin… kunye ne-NMN powder kunye? Ngoba?
Isiseko kwizifundo ezivela kuGqirha David Sinclair kunye neqela lakhe, ukuthatha i-NMN powder nezinye izongezo kuluncedo kakhulu ekuchaseni ukuguga. Okwangoku, ndiza kwabelana ngezongezo ezi-3 xa sithatha i-NMN powder. Izongezelelo ezi-2 yi-resveratrol kunye ne-pterostilbene. I-Resveratrol yi-stilbenoid efumaneka kulusu lweediliya kwixabiso eliphantsi. Izifundo zibonise ukuba i-resveratrol inganciphisa umngcipheko wesifo sentliziyo, umhlaza kunye ne-neurodegeneration. UDavid Sinclair ukholelwa ukuba i-resveratrol isebenza ngokudibeneyo ne-NMN. I-Resveratrol iyadingeka ukuze isebenze i-sirtuin genes (ekhusela i-DNA kunye ne-epigenome), ngelixa i-NMN ifunwa ukubasela i-sirtuins, nangona kunjalo, i-resveratrol kunzima ukufunxwa ngamathumbu, kwaye i-resveratrol encinci ephela emzimbeni yaphukile. phantsi ngokukhawuleza okukhulu.Ngoko ke, i-pterostilbene yindlela engcono. I-Pterostilbene yimolekyuli ejongeka ngokufana ne-resveratrol, kodwa ifunxwe ngcono kakhulu kwaye izinzile kakhulu emzimbeni womntu.
Olunye ukongezwa yi-trimethylglycine (TMG), xa sithatha i-NMN powder ixesha elide, i-NMN igqiba amaqela e-methyl ngaphakathi kwemizimba yethu, njengesilumkiso, kucingelwa ukuba kubalulekile ukuthatha i-TMG (i-amino acid eyaziwa ngokuba yi-betaine) ukunikela ngamaqela e-methyl. Xa i-NMN iguqulwa yaba yi-NAD +, i-nicotinamide (NAM) iyenziwa. Amanqanaba aphezulu e-nicotinamide awalunganga kwimizimba yethu kwaye ukuze imizimba yethu ilahle i-nicotinamide kufuneka ichithwe kwi-N-methyl nicotinamide ekhutshwe kumchamo wethu. Ukuze wenze i-methylate NAM, umzimba ngokwenyani utsala koovimba bethu bamaqela e-methyl. Ithiyori kukuba kokukhona uthatha i-NMN, kokukhona amaqela e-methyl ayacelwa ukuba alahle i-NAM.
Kwipodcast engezantsi noGqirha Mercola, uGqr.David Sinclair ukhankanye ukuba uthatha i-TMG njengenyathelo lokuthintela oku ukuba kungenzeki, sinokufunda ezinye iinkcukacha kule vidiyo kaGqirha David Sinclair:
Nangona uninzi lwezongezo kuthiwa lukhuselekile kwaye luluncedo kwimizimba yethu, kusoloko kulunge ukujonga ugqirha wakho ngaphambi kokuba uthathe, ngakumbi ukuba unempilo kwaye usebenzisa amayeza anganyangekiyo. Njalo landela umyinge okhuthazwayo.
Impendulo yokuqala yomzimba kwisongelo esosulelayo esifana ne-COVID-19, eyaziwa ngokuba yi-immune innate activation, ixhomekeke kwi-NAD +. Usulelo lwentsholongwane luyayiphelisa i-NAD + kuba usulelo lubangela ukhuseleko lweselfowuni olukhokelela ekonyukeni kwe-NAD + ukuthotywa ukuthintela intsholongwane ekuthatheni iseli. Ukuncitshiswa okuphawulekayo kwe-NAD + kubonisiwe kwi-COVID-19 kwaye abanye abaphandi bacinga ukuba le yeyona nto ibangela ukuba le ntsholongwane ibulale kangaka, ngakumbi kwabo banogcino lwe-NAD +. Ugqirha Zhavoronkov ucebise ukuba kuvavanywa i-dose ephantsi ye-rapamycin ngokukodwa okanye ngokudibanisa ne-metformin, kunye ne-NAD + zokukhuthaza ezifana I-nicotinamide riboside (NR), okanye i-nicotinamide mononucleotide (i-NMN) inokunceda ukukhusela abantu abadala kusulelo lwe-gerolavic namhlanje kwaye inokuphucula ukubuyela kwimeko yesiqhelo xa ubhubhane wehlabathi uphelile.
Ukongeza, uphononongo lubonakalisile ukuba i-NAD + inokubangela ukuphendula kwamajoni omzimba ukukhusela umzimba kwi-coronavirus efana ne-COVID-19. Uphengululo olupapashwe nge-Matshi 23, 2020 yiYunivesithi yaseIsfahan yezeNzululwazi yezoNyango ibonelela ubungqina bokuba amanqanaba asezantsi e-NAD + angabotshelelwa kumanqanaba aphezulu obukrakra kunye nokugula kubhubhane we-COVID-19. Ngokweemvavanyo zeklinikhi, izongezo ze-NMN zonyusa i-NAD + kumanqanaba obutsha. Ukwenza imolekyuli ye-NAD + ifumaneke kwiijethi ze-SIRT1 kuphucula amandla abo okukhusela umzimba kwizifo kunye nokonakala. Njengoko kuqhutywa izifundo ezininzi, abaphandi bafumanisa ukuba i-NAD + ikwanendima ebalulekileyo ekufuneka iyidlalile kulawulo lomzimba wethu.
Baye bafumanisa ukuba ii-macrophage (uhlobo lweseli emhlophe yegazi etya abahlaseli abanokubakho njengebhaktheriya, ifungi, iiparasites, kunye neentsholongwane) zisebenzisa indlela eyenziwe yi-NAD + ukuqinisekisa ukusinda kweseli kunye nokulawula ukudumba. Lilonke, izifundo zibonisa ukuba i-NMN kunye namanqanaba okwanda kwe-NAD + angadlala indima ebalulekileyo ekuncedeni imizimba yethu ukulwa nosulelo kunye neebhaktiriya. Ngamanye amagama, inakho ukukhulisa amajoni akho omzimba kunye nokubanceda ngamaxesha osulelo kunye nokugula.
Isifundo semeko sapapashwa ngo-Epreli 22, 2020 nguGqirha Robert Huizenga MD kwiDyunivesithi yaseChicago echaza impendulo yakhe kumfazi oneminyaka engama-55 owayelaliswe esibhedlele nge-COVID-19 nge-Matshi 16. Imeko yakhe yaqhubeka nokuba mandundu nangomhla 13 wayenayo inyumoniya ebonakalayo, isiqhwithi se-cytokine kunye ne-hsCRP ephezulu kakhulu, uphawu lokumakisha olungachazanga. Ugqirha Huizenga wamphatha nge-NMN yomlomo, i-betaine kunye ne-NaCl (eyaziwa ukunciphisa i-IL-6) kwaye yaqhubeka nonyango lwe-zinc awayelunikwe ngaphambili. Ngomhla we-15, umkhuhlane wakhe wancitshiswa kwaye iimpawu zaphucuka kakhulu. Ngomhla we-17 wakhululwa ukuba aye ekhaya. Ngomhla wama-23, wayengenampawu. Abanye abaguli abalupheleyo baphathwa nge "cocktail" efanayo kwaye bobabini banamava afanayo.
I-Nicotinamide mononucleotide (i-NMN) kunye ne-nicotinamide riboside (i-NR) zizinto ezingaphambi kwe-biosynthetic ukuya kwi-molecule ebalulekileyo ye-metabolism-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +). Eli qela longeze i-phosphate lenza i-NMN ibe yimolekyuli enkulu kune-NR. I-NR (nicotinamide riboside) kunye ne-NMN (nicotinamide mononucleotide) izongezo zozibini zihlala zinikwa njengezona zimbini zithembisayo izongezo zokunciphisa ukuguga.Ukuthatha i-NR kunye ne-NMN powder yonyusa amanqanaba e-NAD. Amanqanaba aphezulu eNAD + akhusela i-epigenome kunye ne-DNA yethu. Ukunyusa amanqanaba e-NAD + kukhokelela kwizibonelelo ezininzi zempilo kumalungu ahlukeneyo, anje ngengqondo, inkqubo yentliziyo, kunye nezihlunu.
Ngenxa yokuba i-NR kunye ne-NMN zonyusa amanqanaba e-NAD +, zihlala zibizwa ngokuba zonyusa i-NAD. Izifundo ezininzi zibonisa ukuba i-NR kunye ne-NMN zinokuphucula iimpawu ezahlukeneyo zokuguga, njenge-epigenome edibeneyo, umonakalo we-DNA, ukuqokelela kweprotheni, ukudumba (ukudumba okunxulumene nokuguga) kunye nezinye iindlela ezahlukeneyo zokuguga.
Kodwa owona mbuzo ubalulekileyo yile: yeyiphi engcono, i-NMN powder okanye i-NR powder?
Okwangoku, akukho zifundo zithelekisa i-NMN kunye ne-NR entloko ngokubhekisele kwiziphumo zempilo kunye nefuthe lobomi. Makhe sithelekise i-NMN kunye ne-NR:
Ndiyakholelwa ukuba ufumene abathengisi abaninzi xa ubeka "i-NMN powder" kuGoogle, ukuze ungazi ukuba yeyiphi efanelekileyo okanye efanelekileyo kuwe. Sifuna ukuqonda ukuba kufuneka sijonge ntoni xa sithetha nomthengisi we-NMN powder. Ukujongana nale ngxaki, ndithethile nabanikezeli abaninzi be-NMN powder online kwaye uhlele uluhlu lweenkcukacha:
Kufuneka ujonge iwebhusayithi yabo okanye iivenkile ezikwi-intanethi, qiniseka ukuba bangabathengisi abathembekileyo, hayi ukukopela.Yiya kwiwebhu okanye iivenkile zabo, thetha nabo, ubuze imibuzo nantoni na oyifunayo. xa bephendula imibuzo yakho, unokuziva ukuba kukuthenjwa, njengoko sonke sisazi, ukunyaniseka sisiseko sayo yonke intsebenziswano. Xa ubuza imibuzo yabo, ungathetha ngale miba: ukwenziwa kwepowder yeNMM, isatifikethi se powder seNMN, ukubonelela ngomthamo weNMN powder….
(2)Qinisekiso lo mgangatho
Eyona powder i-NMN yeyona 99% yobunyulu okanye ngaphezulu. Ayizukuqulatha naziphi na izinto zokugcwalisa okanye iimveliso ezifana nee-GMOs, ubisi, iqanda, isoya, igluten, imichiza eyenziweyo, isinyithi esinzima, okanye izinyibilikisi ezisetyenziswa kulwenziwo lwemveliso. Uninzi lwe-NMN powder lusebenzisa iifilitha okanye izinto ezikhuthazayo ukwenza uninzi lwemveliso. Oku kunokubeka impilo yakho emngciphekweni omkhulu kuba awuyazi into oyithathayo. Ukuba uthenga i-NMN yakho kwinkampani ethengisa kuphela iifomsile ze-NMN, kunokuba yiyo nantoni na.
(3)Amaxwebhu ahambelanayo-Iingxelo zovavanyo
Njengomzi-mveliso we-NMN powder, amaxwebhu ahambelana noko (i-COA, i-HPLC, i-HNMR, i-MS) aya kuphuma emva kokuba bevelise iimveliso ze-batch, bafuna ukujonga umgangatho wayo, bayithumele kwiilebhu ze-3 ukwenza uvavanyo (oku kubandakanya ubunyulu, ukungcola, kunye nezinyithi ezinzima), qiniseka ukuba ikumgangatho kwaye ungayithengisa kwimarike Njengomthengi, kuya kufuneka ukwazi ukucela ukubona ezi ngxelo, ngakumbi i-COA kunye ne-HPLC. Ungajonga iwebhusayithi yomthengisi ngenkcukacha zovavanyo lomntu wesithathu, okanye uqhakamshelane nenkonzo yabathengi ngokuthe ngqo. Ukuqinisekiswa kovavanyo lomntu wesithathu yindlela elula yokuqinisekisa ukuba uthenga kumthombo odumileyo. Nayiphi na inkampani esebenzisa uvavanyo lomntu wesithathu kufuneka ikonwabele ukwabelana nawe ngalo lwazi.
(4)Thelekisa ixabiso eliphakathi kwabaxhasi abaninzi
Ixabiso le-NMN yenye imethrikhi onokuyisebenzisa ukulinganisa ukufaneleka komnikezeli ngeenkonzo, ngokujonga inani labanikezeli be-NMN bobabini umgubo kunye neepilisi njenge-gram. Lumkela umgubo we-NMN wobuxoki, okanye iimveliso ezisezantsi. Ihlala ilinga ukufuna ukugcina imali ngalo naliphi na ithuba onalo, kodwa ngokukhethekileyo kwi-NMN, ufumana oko ukuhlawulayo. I-NMN enexabiso eliphantsi iya kuba kwinqanaba lokutya, hayi inqanaba lokuxuba amayeza, oko kuthetha ukuba izibonelelo zeNMN azifani. Ngapha koko, ngamanye amaxesha kubakho ngaphantsi kwe-10% ye-NMN kwinqanaba lokutya le-NMN. Ukuvavanya oku, sasinezinga lokutya Isampulu yeNMN kuvavanywe kwaye yabuya ne-8% ye-NMN Ukujonga uhlahlo-lwabiwo mali kubalulekile, kodwa ungaphela uhlawula ngaphezulu ekuhambeni kwexesha xa ukhetha iimveliso zexabiso eliphantsi zeNMN ukuba awuboni zibonelelo zempilo kuzo.
Umgangatho weNMN uvela kubanikezeli bekhwalithi, umthengisi onokuthenjwa kufuneka abe nenkonzo ebalaseleyo kubathengi. Xa uthetha nommeli ophetheyo, thumela yonke imibuzo kubo kwaye baya kuyiphendula kwakamsinya.Ukongeza, sazise inkqubo yokuthenga iphela, ukuba ungayenza njani kwaye kukwazise into ekufuneka uyenzile kwinqanaba elilandelayo, yonke inkqubo kufuneka ukulandelelwa nguwe. Nceda ukhumbule ukuba inkonzo elungileyo yabathengi ngumntu oziva ekhululekile ukunxibelelana nabanye nangaliphi na ixesha.
(6)Izimvo zabanye abaXhasi
Ngokubanzi, sinokufumana uphononongo malunga nenkampani ukuba inkampani ibonelele ngomgubo we-NMN ixesha elide, okanye banokunika ezinye iimpendulo ezivela kwabanye abathengi. Emva kwayo yonke loo nto, sinokwazi ukuba yinyani okoko benerekhodi yentengiso kunye nengxelo yokwenyani yabathengi. Ewe kunjalo, kufuneka sazi ukuba uphononongo oluvela kwabanye abathengi njengereferensi xa sithatha isigqibo sokuthenga umgubo weNMN, kuxhomekeke kuwe ekugqibeleni.
I-AASraw yinkampani eqinisekisile umzi-mveliso, inokuvelisa ngobuninzi i-NMN powder kunye nezinye izinto zokulwa ukuguga, unikezelo luzinzile. Uya kwiwebhusayithi yabo-www.aasraw.com nangaliphi na ixesha kwaye ubuze inkonzo yabo yabathengi, cela isatifikethi somgangatho kunye neengxelo zokuvavanya kwi-3rd-lab, qinisekisa ukuba i-NMN powder yabo i-99% ye-purity ye-pharmacetical grade kwaye iphezulu. Ngokwazi kwam, banokuyithumela imveliso oyalele kwi-1-3 yeentsuku zokusebenza, nokuba ziiyure ezili-12 emva kokuba iodolo iqinisekisiwe, ukusebenza ngokukuko kuphezulu kakhulu, kuya kufuneka ndibanike isithupha ngenxa yoko. Uya kufumana umfanekiso we-NMN powder kunye nenombolo yokulandela umkhondo kubo emva komyalelo, emva koko unokusebenzisa umkhondo wepasile ekwi-intanethi kwaye wazi apho ikhoyo, ikude kangakanani nekhaya lakho. Funda kabanzi malunga ne-AASraw ngoku
→ INicotinamide Mononucleotide
INicotinamide riboside (NR) kunye ne-nicotinamide mononucleotide (NMN), zibonisiwe ukuphucula izifo ezinxulumene nobudala kwizilwanyana. Ziyanyamezeleka kakuhle kwiidosi eziphezulu kwaye ziphakamisa ngokufanelekileyo amanqanaba e-NAD +. Ezi molekyuli azizinzi kwishelufa kumaqondo obushushu aphezulu okanye kwiimeko zobushushu obuphezulu, nangona kunjalo. Ngokukhawuleza bahlambela kwi-nicotinamide, ethintela umsebenzi we-sirtuins kunye ne-PARP, i-enzyme yokulungisa i-DNA. Iziphumo ezilungileyo, i-NMN powder kufuneka igcinwe kwizikhongozeli zayo zangaphambili kwaye kude nawo nawuphina umthombo wamanzi. I-NMN powder engafakwanga iinyanga ezi-3 okanye ngaphezulu inokufakwa efrijini ukuqinisekisa ukuba igcina amandla apheleleyo. Njengenkokeli yehlabathi lonke, i-AASraw ihlala ibonelela ngowona mgangatho uphezulu kunye ne-NAD + kunye ne-NMN powder ekhoyo.
UTom wase-UK: Umfazi wam kunye nam saqala ukuthatha umgubo we-NMN kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo kwaye sothuka ndayeka ukurhona kwaye iingxaki zolusu lomfazi wam zaqala ukuncipha! Siziva nje ukucaciseka okungcono kwengqondo ngendlela yamandla, andikaze ndithathe isongezo endiye ndasabela ngokubonakalayo kuwe ukuba uthatha iivithamini ezininzi kunye nezongezo zemifuno kodwa ungaze uzive iziphumo! Olu lolona hlobo longezelelekileyo lomntu olongezelelekileyo olufunyenweyo okwangoku kwaye ukubuyisela izigidi zeeseli emzimbeni womntu kukufumanisa okumangalisayo kwinkqubo yokwaluphala! Ndicinga ukuba wonke umntu uza kuyazi le pilisi kungekudala kwaye uphando lomhlaza luya kuqaphela, sikwi-50's kwaye asinakutsho ngokwaneleyo malunga nendlela esivakalelwa ngayo! Ngubani ongafuniyo ukuziva usempilweni ukongeza oku kulongezo lwakho lokuguga ekuncediseni ukutya kuya kutshintsha ubomi bakho ukuze undithembe ngcono !!!
liMei yase China: Ndikhethe i-NMN powder kuba ndiyifundile inceda ekunyangeni igazi kwaye ihambisa ioksijini kwizicubu zomzimba wam. Umzimba wam ubufuna le mveliso, bendiziva ndidiniwe kwaye ndingenakukwazi ukugxila. bendi ukuthatha i-NMN powder iiveki ezimbini ngoku. Ndibonile ukwanda kwamandla, ndiyakwazi ukuthatha inxaxheba kwinkqubo yovavanyo lomzimba emva kokusebenza imini yonke. Iingcinga zam zicacile, andizeli ziintlanganiso. Ndonwabile kakhulu ngezongezo ze-NMN ndifumana iziphumo ebendizifuna. Ukongeza, kufuneka nditsho: Ixabiso le-NMN liphezulu kum kodwa ndifuna ukunyanzelisa, kuba ndifuna ukuba mncinci ngakumbi, haha…
UGary wase-Australia: Esi sisongezelelo esihle sokulwa ukuguga. Ndiqaphele ukwanda kwamandla, khange ndibambe ingqele yeminyaka yam emi-4, kwaye andidinwa ngokulula. Uhlobo lwamandla endiva ukuba lwahlukile kwi-caffeine ephezulu. Andiziva ndixhalabile okanye ndivuseleleke kakhulu, ndiphaphile ngokwenene kwaye nditsha. Ngaphandle kokulumkisa, ukulala kwam kuphuculwe. Andizange ndibenangxaki yokulala, kodwa ndinokuvuka kakhulu ebusuku. Ngomgubo weNMN ndilala ixesha elide ngokuzolula. Ndicinga ukuba i-NMN iyandinceda ngeendlela ezininzi kwaye andikwazi tu ukuthetha ngokwaneleyo ngayo.
USteven wase-USA: Emva kokufunda malunga ne-NMN powder kunye neziphumo ezinokubakho ezivela kuFundo lweHarvard oluqhutywa nguGqirha David Sinclair, ndaye ndagqiba kwelokuba ndizame. Ukususela ngomhla wokuqala ndizamile, ndaqaphela umahluko kwinqanaba lam amandla. Ndineminyaka engama-57 ubudala, kwaye imetabolism yam ibonakala itshintsha ibangcono. Khange ndiyitshintshe indlela enditya ngayo, kodwa ndinciphisa ubunzima, i-14 lbs kwiiveki ezi-4. Elo xesha lobunzima libonisa ilahleko esisigxina. Umfazi wam ulahlekelwe zii-9 lbs, kwaye unengxaki enqabileyo ebizwa ngokuba yi-Erythromelalgia, ebangela ukuba imiphetho ibe shushu kakhulu ngentlungu ye-neuropathic, kwaye iyahambelana. Inxalenye yeNiacin yekhompawundi, ukongeza kumayeza akhe, yenze ukuba iintlungu zinciphe ngandlela thile, kwaye zenza ukuba kusebenze ngakumbi. Emva kokuba ndiphume okokuqala-ndizamile enye evela kubanikezeli bomgubo we-NMN. Ikhompawundi yahlukile, kwaye amandla achithwa. Kungenxa yoko le nto ndibuyele kwi-MAAC10, kwaye ngoku ndibuyile emgceni. Uyazi, ndiyakholelwa nokuba ezinye iinwele zam ezingwevu ezigcweleyo ziye zamnyama ngaphandle kwedayi. Iyasebenza-Uyazi-andicingi ukuba ndijonga i-57 kwakhona.
Ngelixa uMthombo woLutsha uhlala uyintsomi emnandi engenakufezekiseka nangaliphi na ixesha kungekudala, isayensi emva kwamayeza alwa nokuguga iyaqhubeka ukuqhubela phambili. Mhlawumbi ngenye imini, uya kuba nakho ukuthatha ipilisi engummangaliso kunye namava obomi njengomntu osemdala kwakhona. Izifundo kwizilwanyana zibonise iipropathi ezithembisayo ze-NMN kwi-NAD + -ukuqinisa kunye nokuguga. Ngoku, nangona abaphandi beqhubela phambili novavanyo lweklinikhi ukuphanda ukhuseleko kunye nokusebenza kweemolekyuli ebantwini. Izibonelelo zeNAD kunye neNMN bonelela ngezibonelelo zokwenyani zokucothisa iziphumo ezibi zokuguga kweseli emzimbeni womntu. Ndiyakholelwa ukuba iyakuba luncedo okoko nje iluncedo kwimizimba yethu, Masiphinde sisebatsha kunye.
 Emantla, BJ, Rosenberg, MA, Jeganathan, KB, Hafner, AV, Michan, S., Dai, J.,… & van Deursen, JM (2014). I-SIRT2 inciphisa indawo yokutshekisha i-kinase BubR1 ukunyusa ixesha lokuphila. Ijenali ye-EMBO, e201386907.
 UKiss, T., Nyúl-Tóth, Á., Balasubramanian, P., Tarantini, S., Ahire, C., Yabluchanskiy, A.,… kunye ne-Ungvari, Z. (2020). Ukuxhaswa kweNicotinamide mononucleotide (NMN) kukhuthaza ukuvuselelwa kwe-neurovascular kwiimpuku ezindala: umbhalo okhutshelweyo wokusebenza kwe-SIRT1, ukhuseleko lwe-mitochondrial, anti-inflammatory, kunye ne-anti-apoptotic. Isayensi, 1-20.
 IGrozio, A., iMills, KF, Yoshino, J., Bruzzone, S., Sociali, G., Tokizane, K.,… kunye neImai, SI (2019). I-Slc12a8 ngumthuthi we-nicotinamide mononucleotide. Imetabolism yendalo, 1 (1), 47-57.
 Li, J., Bonkowski, MS, Moniot, S., Zhang, D., Hubbard, BP, Ling, AJ,… kunye neSinclair, DA (2017). Ipokotho ebophayo ye-NAD + ebophayo elawula ukuhlangana kweprotein-protein ngexesha lokuguga. Inzululwazi, i-355 (6331), 1312-1317.
 I-Stipp D. Ngaphandle kwe-Resveratrol: I-Anti-Aging NAD Fad. Inethiwekhi yeNzululwazi yaseMelika. Ngomhla wamashumi amabini ananye ku-Matshi 11.
 Tarragó MG, Chini CC, Kanamori KS, Warner GM, Caride A, de Oliveira GC. + Yehla. Iseli Metabolism. Ngomhla we-2018, 27 (5): 1081-1095.e10. I-PMC 5935140. PMID 29719225. ikhonkco: 10.1016 / j.cmet.2018.03.016.
 UBogan KL, uBrenner C.Nicotinic acid, i-nicotinamide, kunye ne-nicotinamide riboside: kuvavanyo lweemolekyuli ze-NAD + zandulela iivithamini kwisondlo sabantu. Uphengululo lonyaka lweZondlo. Ngo-2008, 28: 115-30. IINKCUKACHA:
 UFletcher RS, uLavery GG (Okthobha 2018). "Ukuvela kwe-nicotinamide riboside kinases kulawulo lwe-NAD + metabolism". Ijenali ye-Molecular Endocrinology. 61 (3): R107 – R121. ikhonkco: 10.1530 / JME-18-0085. I-PMC 6145238. PMID 30307159.